2022 Mudaaharaadka ka socda Androidsis - Hel mobiillo bilaash ah ama kiniinno | Androidsis (Bogga 2)
Hadda waxaad fursad u leedahay inaad ku hesho Samsung Galaxy Note 8 bilaash. Ka qaybqaadashadu waa mid aad u fudud, waxaanan kuu sheegaynaa sida loo sameeyo.
Ma jeceshahay inaad mid kasta ka qaadato mid ka mid ah OnePlus 5 gebi ahaanba bilaash? In Androidsis waxaan kuu sheegeynaa sida loo sameeyo si aad uga qayb gasho oo aad guuleysato
Dhowr maalmood ka dib markii aan ka hadlayey LEAGOO KIICAA MIX cusub, astaamaheeda oo dhan iyo halka aad sida ugu wanaagsan ka heli karto ...
Bixinta caalamiga ah: hel Huawei Mate 9 oo bilaash ah
Ma rabtaa inaad ku guuleysato cutub ka mid ah Huawei Mate 9 gebi ahaanba bilaash? Waxaan kuu sheegeynaa sida looga qayb galo tartankan caalamiga ah loona tartamo nasiibka
Waxaan rabnaa LEAGOO T5!
Haddii dhowr toddobaad ka hor aan ku dhawaaqnay iibinta horudhaca ah ee Leagoo T5, maanta waxaan kuu keenaynaa lama filaan aad u soo jiidasho leh dhammaan ...
Waxaan ku bilaabeynaa usbuuc cusub barnaamijka 'Androidsis' si weyn, waxaan kugu wargalineynaa isku aadka si aad ugu guuleysato Samsung Galaxy S8 Plus gabi ahaanba bilaash
OnePlus 5 Bixinta Ma waxaad dooneysaa inaad ku guuleysato taleefannada casriga ah ee sannadka bilaash ah?
Ma rabtaa in OnePlus 5 uu ku dhufto suuqa? Hagaag markaa waan hubaa inaad waali doonto inaad tan ogaato tan iyo ...
Waxaan uraacineynaa ZTE Blade V7 Lite oo ay ugu mahadcelinayaan iskaashiga ZTE. Miyaad seegi doontaa tartankeena tooska ah? Xusuusnow inay ku egtahay 48 saacadood!
Champions-ka rubuc-2017 ayaa si toos ah ugu sawiraya Android-kaaga
Isku aadka Champions quarter-ka 2017 ayaa si toos ah uga socda xaruntaada Android, waxaan kuu sheegaynaa siyaabaha kala duwan ee aad ugu daawan karto bilaash iyo meel kasta oo aad joogto.
DOOGEE wuxuu soo bandhigayaa taxane casri ah oo xiiso leh si loogu dabaaldego daahfurka DOOGEE Shoot 2, oo lagu daray loolanka baraha bulshada.
Haa, haa, waad aqrisay xaqaas! Maanta waxaan la yaabnay barnaamijka loo yaqaan 'Androidsis' maaddaama aan waxba ka soo jiidanaynin wax intaas ka badan ...
Ma rabtaa inaad kaqeyb gasho bakhtiyaa-nasiibkeena loogu talagalay RHA T20s? Hagaag, raac talaabooyinka si aad ugu tartantid oo aad uhesho dhagaha dhagaha ugu fiican suuqa, iyo bilaash!
Ku guuleysto Samsung Galaxy S7!
Ma rabtaa inaad ku guuleysato Samsung Galaxy S7 Gold platinum 32GB oo leh Androidsis.com?. Kaliya waa inaad raacdaa 3 talaabo oo fudud si aad ugu guuleysato casrigaan bilaashka ah.
Waxaan ku dhejineynaa Zopo Color S5.5, ha moogaanin tartankeena!
Kaqeyb qaado qunyar socodka oo ku guuleysto Zopo Color S5.5, taleefan casri ah oo leh shaashad 5.5 inji ah iyo processor afar geesle ah Maxaad sugeysaa!
Tartanka RHA, waxaan kudhaxeynaa samaacadaha RHA S500
Dhowr toddobaad ka hor waxaan kuu soo bandhignay gorfeyn dhammaystiran oo ku saabsan RHA S500, dhegaha dhegaha ee u taagan ...
Kaqeybqaad isku aadka maalinlaha ah ee barnaamijka lacag bixinta leh barnaamijka cusub ee Xeerarka Koodhadhka
Xeerarka Promo waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku guuleysato barnaamij lacag leh maalin kasta iyada oo ay ugu wacan tahay qashin-qaadka maalinlaha ah ee barnaamijyada tayada sare leh
Waxaan uxiraynaa 'Cubot S600' gebi ahaanba bilaash dadka isticmaala Androidsis iyo kuwa raacsan
Waxaan ku soo laabaneynaa raayadaha 'Androidsis', waqtigan oo leh raaf caalami ah oo aan dooneyno inaan ku siino ...
Bluboo Xtouch Bixinta
Ma rabtaa inaad ku guuleysato Bluboo Xtouch? hadday sidaas tahay, kaqeybqaado Bixinta 'Bluboo Xtouch' ee 'Androidsis' iyo 'Everbuying' ay si buuxda kuugu siinayaan adiga.
Waxaan rabnaa inaan maqalno qaar ka mid ah sameecadaha RHA T10, miyaad nagu soo biiri doontaa?
Ma dooneysaa inaad soo gasho bakhtiyaa-nasiibka loogu talagalay RHA T10 sameecadaha dhegaha leh oo ay ku habboon tahay RHA iyo Androidsis Raac sharciyada tartankeena si aad uga qeybgasho!
Waxaan uxiraynaa 3 liis-gareyn ah Xulashada Wauki ee saddex bilood gebi ahaanba bilaash ah
Qeybta 'Androidsis' waxaa iska leh Wuaki TV, Waxaan ku shubnay 3 liis-gareyn ah Xulashada Wauki muddo saddex bilood oo bilaash ah.
Kaqeybqaado barnaamijka 'Androidsis UMI Emax Mini Draw', oo ah barbaro caalami ah oo kharashka maraakiibta lagu bixiyo meel kasta oo adduunka ah.
Doogee F3: qeexitaannada iyo astaamaha
Ma rabtaa inaad daahfurto Doogee F3 cusub?. Maanta waxaan kuu keenaynaa dhammaan qeexitaannada, helitaanka iyo qiimaha bilowga ee casrigaan cusub ee Doogee
Ku guuleysto samaacadaha RHA MA750i adoo siinaya Androidsis cusub
kaqeybgal tartanka 'Androidsis' halkaas oo, iskaashiga iskaashiga ah ee RHA, aan kudhaxeyneyno lacag dheeri ah RHA MA750 i headphones oo lagu qiimeeyo 99 euro.
Isku Aadka Caalamiga ah Moto G 2014 mahad Androidsis iyo Actualidad Motor
Iyada oo ah Moto G 2014 sawir caalami ah oo ay sameeyeen Androidsis iyo Actualidad Motor waxaad awoodi doontaa inaad ku guuleysato mid wajigaaga ah.
Dib u eegida Keyboard ee Samsung Galaxy Tab 2
Kumbuyuutar aad u fiican oo Bluetooth Bluetooth ah, oo ku habboon kiniinnada 10-inji ah, in kasta oo loo isticmaali karo qalab kasta oo Android ah, PC ama Mac.